I-Moeraki Harbourside Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEwen
(UBULUKU OBUNYE IMIQATHANGO - Kufuneka uze nelinen yakho okanye uhlawule i-$ 30.00 eyongezelelweyo kubantu aba-2 ngokuphindwe kabini, ii-singles zizongezelelweyo i-$ 20.00)
Traditional kiwi bach ime kumbindi welali yaseMoeraki malunga nezibuko kunye neFleur's Cafe. Ukuhamba ngemizuzu emibini ukuya eTavern, ijethi kunye nolwandle. Hlala kwidesika kwaye ubukele izikhephe okanye ujonge iHector Dolphins, izitywina okanye iingonyama zolwandle.
(Ukubhukisha ngobusuku nje obunye kusenokungenzeki....ingakumbi ngeempelaveki)
Le ndlu encinci yeyona ndlu indala kwi-Bay. Ibuyiselwe ngendlela yokuba kugcinwe umtsalane kunye nesimilo seKiwi bach kodwa ngokugqunywa kwanamhlanje kunye nezinto eziluncedo. Besizakuhlaziya ikhitshi kodwa iindwendwe ziyazithanda iibhentshi zeformica, iitafile kunye neekhabhathi zomthi ukuze zihlale zisexesheni elizayo. Amagumbi okulala mancinci, anebhedi ephindwe kabini kwelinye igumbi kunye nesibini esingatshatanga kwelinye.
4.56 out of 5 stars from 118 reviews
4.56 · Izimvo eziyi-118
Singaphaya kwendlela esuka kwiFleurs Cafe edumileyo, kwaye sihamba ngemizuzu emibini ukuya kwi-wharf kunye neTavern. Zininzi iitshatha zokuloba esinokukhetha kuzo okanye sinendawo yokupaka isikhephe sakho. Esona koloniyali inkulu yeYellow Eyed Penguin eNZ kunye nekoloni yetywina zifumaneka kwimizuzu elishumi xa uhamba ngemoto kwiLighthouse. I-Moeraki Boulders yimizuzu engama-45 yokuhamba okanye imizuzu elishumi ukuhamba. Kufuphi nekhaya kukho iilwandle ezintle, iindlela zokuhamba ezithandekayo, kunye neendawo ezimbini zokuhlala ezincinci eziselunxwemeni, iiKaiks, ezimele zibonwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Ewen
SiseMoeraki kuphela ixesha elithile ngoko ke sisenokungabikho xa ufika. Ukuba sikhona sisendlini ngasemva kwaye sizakuzazisa kwaye siyakuvuyela ukusebenzisana okanye sikushiye ukonwabele ukuhlala kwakho. Sibambe i-15 iminyaka kwaye siyakonwabela ukudibana nabantu kunye nokudala iindawo abantu abaziva bekhululekile kuzo.
SiseMoeraki kuphela ixesha elithile ngoko ke sisenokungabikho xa ufika. Ukuba sikhona sisendlini ngasemva kwaye sizakuzazisa kwaye siyakuvuyela ukusebenzisana okanye sikushiye ukon…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moeraki, Otago, NZ